Ygeman: Meelaha dadku ku badanyihiin ayaa si gaar ah u ilaalinayna - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Henrik Montgomery/TT och Fredrik Sandberg/TT
Ygeman: Meelaha dadku ku badanyihiin ayaa si gaar ah u ilaalinayna
La daabacay onsdag 18 november 2015 kl 19.02
Wassiirka arrimaha gudaha Anders Ygeman ayaa dhowaan shir saxaafadeed oo u qabtay ka sheegay in ilaalista lugu soo kordhinayo meelaha ay dadku ku badanyihiin, tusaalahan gadiidka dadweynaha, kiniisadaha, masaajidyada iyo macbadka yuhuuda.
Anders Ygeman ayaa jidhi in ay hanjabaadani shuqul ku lahin dadyowga Iswiidhan ku nool, waxa loo hanjabay ururada diimaha.
Ygeman ayaa jidhi in la ogayn in u ninkani iminka Iswiidhan joogo, warbixintan ayaa ka duwan kii u Anders Thornberg, madaxda SÄPO mar dhoweed dhiibay. Thornberg ayaa sheegay in u ninkan waddanka ku jiro.
Dawladda Iswiidhan ayaa xagaagi ina soo dhaafay dhowr qorshe oo ku saabsan amaanka soo dejisyay, kuwaan oo si deg deg ah intaa aana fasaxa kristmaska la galin barlamaanka looga codeynayo, ayuu sheegay.
Mid ka mid ah kuwan ayaa ah in dhoofka xaqjirka ah dembi laga dhigo. sido kale in gacan caawimaad ah amba koxahan la maalgeliyo.